स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारिरीक सम्बन्धमा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ? – Kavrepati
Home / समाचार / स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारिरीक सम्बन्धमा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ?
admin August 24, 2021	समाचार Leaveacomment 482 Views
काठमाडौं । भारतीय लेखक शिव खेराले भनेका छन, ‘बिजेताहरु फरक कुरा गर्दैनन्, उनीहरु फरक तरिकाले गर्छन् ।’ यो सबैको जीवनमा लागु हुन्छ ।
यस्तै शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्दा पनि अनेक तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
यदि तपाईं बेडरूममा मात्रै हुने शारीरिक सम्बन्धलाई लिएर बोर हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाईंलाई केहि नयाँ कुरा बताउन गइरहेका छौँ ।
बेडरूममा मात्रै हुने सम्पर्कका कारण दिक्क मानिरहनु भएको छ भने बाथरूम तपाईंका लागि उचित विकल्प हुन सक्छ । हो, तपाईंको घरमा धेरै त्यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ तपाईं नयाँ तरिकाले आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । घरको बाथरूम पनि एक त्यस्तो ठाउँ हो ।
सबैभन्दा राम्रो आन्नद प्राप्त गर्नको लागि बाथरूम उपयुक्त हुन्छ । यो ठाउँमा गोपनीयता पनि छ, वातावरण पनि रोमान्टिक हुन्छ । तर बाथरूममा सम्बन्ध कायम गर्दा कुनै दुर्घटनाबाट बच्नको लागि तपाईंले सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ ।
त्यसैले आज हामी बाथरूममा सम्बन्ध राख्दा ख्याल गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका तरिकाबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । सम्बन्धको समयमा बाथरूममा कस्तो प्रकार को सावधानी अपनाउनु पर्छ आउँनुहोस् जानकारी लिउँ :
सिट एन्ड स्लाइड आशन
बाथरूममा सम्बन्ध कायम गर्नको लागि सबै भन्दा सजिलो पोजिशन सिट एन्ड स्लाइड हो । यसमा, पुरुष साथी बाथटबमा बसेपछि आफ्नो खुट्टा पुरा तरिकाले फैलाउनु पर्छ । तब महिला पार्टनर आफ्नो इच्छानुसार शीर्ष स्थितिमा कुनै पनि सुविधाजनक आशनमा जान सक्छन् । यो एक रमाईलो र रोमाञ्चक आशन हो ।
क्रिस क्रस पोजिशन
क्रिस क्रस पोजिशनमा सम्बन्ध कायम गर्दा शरीरमा धेरै तौल हुँदैन । यो पोजिशनमा, महिला पार्टनर पहिले बाथटबमा बस्नुपर्छ, त्यसपछि पुरुष पार्टनर बस्छ । त्यसपछि पुरुष पार्टनरले महिलाको दुई खुट्टाको बीचबाट एउटा खुट्टा निकाल्नु पर्छ र एक कैंची जस्तै आकार बनाउनु पर्छ ।
किनभने यो पोजिशनमा, पुरुष साथीले आफ्नो खुट्टा क्रस गरेर बस्नु पर्छ र महिला एक खुट्टा पुरुषको काँधमा राख्छिन् र हात भुइँमा आराम गरिरहेका हुन्छन् । यस पोजिशनमा आँखासँग सिधा सम्पर्क गरेर, तपाईं एक फरक स्तरसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ । यो पोजिशन गर्दा खुट्टाको मांसपेशिहरुलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
गेट द लेग अप पोजिशन
यो पोजिशन स्नानको तल बाथटबमा अपनाउन सकिन्छ । यो पोजिशनमा, महिलाको एक खुट्टा जमीनमा हुन्छ भने अर्को खुट्टा बाथटब माथि हुन्छ । महिला थोरै अगाडि झुक्नुपर्छ, ताकि सजिलै अगाडि वा पछाडि बाट सबैकुरा पूरा गर्न सकिओस् । जे होस्, त्यहाँ पोजिशनमा चिप्लेर लड्ने डर हुन्छ । त्यसैले केहि सावधानी अपनाउनु पर्छ।
यस पोजिशनमा, महिला पार्टनर बाथरूमको पर्खालमा उभिनु पर्छ र पुरुष साथी उनको ठीक अगाडि उभिएको हुनुपर्छ । त्यस पोजिशनमा महिलाले एउटा खुट्टा आफ्नो पुरुष साथीको कम्मरमा र अर्को खुट्टा भुइँमा राख्नुपर्छ ।
पुरुष पार्टनरले आफ्नो महिला पार्टनरको कम्मरलाई सहारा दिनुपर्छ । यस पोजिशनमा, महिला आफ्नो खुट्टासँग आफ्नो पुरुष साथीको कम्मर रैप गर्छिन् । त्यसैले यस्लाई रैपराउण्ड पोजिशन भनिन्छ । यो एक सजिलो र रमाईलो पोजिशन बाथरूमका लागि गज्जब हुन्छ ।
बाथरूममा मुखको प्रयोग धरैले सम्बन्ध पनि निकै रमाइलो हुन्छ । यो धेरै रमाईलो र रोमाञ्चक हुन सक्छ । मुखबाट क्रिया बाथरूममा एक राम्रो पोजिशन हो । पोजिशनको यस प्रकारमा, तपाईं शौचालय सीट वा बाथरूम बेन्चको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसमा, पुरुष वा महिला साथी एक शौचालय सीट वा बेन्चमा बस्न सक्छन्, जबकि अर्को साथी उनको सबैठाउँ मुख प्रयोगका लागि धेरै राम्रो हुन्छ । तपाईं यो दुबै पोजिशनमा एक अर्कासँग मुखबाट सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ ।
Previous समोसा व्यापारी, रेल तथा मन्दिरमा गीत गाउँदै सफल भएका तीन स्टार !
Next प्रहरीनै ग्राहक बनेर गएपछि हाइप्रोफाइल वेश्यावृतिको भण्डाफोर, ३२ बर्षिया मोडेल पक्राउ